Genesis 46 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Yakob ne ne fifo tu kɔɔ Egypt (1-7)
Wɔn a wotu kɔɔ Egypt no din (8-27)
Yosef kohyiaa Yakob wɔ Gosen (28-34)
46 Afei Israel faa nea ɔwɔ* nyinaa siim kɔe. Bere a woduu Beer-Seba+ no, ɔde mmoa bɔɔ afɔre maa ne papa Isak Nyankopɔn.+ 2 Ɛnna Onyankopɔn ne Israel kasae anadwo wɔ anisoadehu mu sɛ: “Yakob, Yakob!” na ogyee so sɛ: “Mini!” 3 Ɔkae sɛ: “Mene nokware Nyankopɔn no, Onyankopɔn a wo papa som no no.+ Nsuro sɛ wobɛkɔ Egypt, na mɛma woayɛ ɔman kɛse wɔ hɔ.+ 4 Me ara me ne wo bɛkɔ Egypt, na me ara masan de wo aba;+ Yosef na ɔde ne nsa bɛka w’ani agu so.”*+ 5 Ɛno akyi no, Yakob fii Beer-Seba; Israel mma no de wɔn papa Yakob ne wɔn mma ne wɔn yerenom tenatenaa nteaseɛnam a Farao de somae sɛ wɔmfa nkɔfa no mmra no mu. 6 Wɔfaa wɔn mmoa ne wɔn agyapade a wonyae wɔ Kaanan asaase so. Enti Yakob ne n’asefo nyinaa koduu Egypt. 7 Ɔde ne mma mmarima, ne mma mmea, ne nenanom—n’asefo nyinaa, kaa ne ho kɔɔ Egypt. 8 Israel asefo a wɔkɔɔ Egypt,+ kyerɛ sɛ, Yakob ne ne mma mmarima ni: Yakob ba panyin ne Ruben.+ 9 Ruben mma ne Hanok, Palu, Hesron, ne Karmi.+ 10 Simeon+ mma ne Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin, Sohar, ne Saul+ a ɔne Kaananni bea woo no no. 11 Lewi+ mma ne Gerson, Kohat, ne Merari.+ 12 Yuda+ mma ne Er, Onan, Sela,+ Peres,+ ne Sera.+ Er ne Onan de, wowui wɔ Kaanan asaase so.+ Peres mma ne Hesron ne Hamul.+ 13 Isakar mma ne Tola, Puwa, Yob, ne Simron.+ 14 Sebulon+ mma ne Sered, Elon, ne Yaleel.+ 15 Eyinom ne Yakob mma mmarima ne ne babea Dina+ a ɔne Lea woo wɔn wɔ Padan-Aram no. Ne mma mmarima ne ne mma mmea nyinaa dodow* si 33. 16 Gad+ mma ne Sifion, Hagi, Suni, Esbon, Eri, Arod, ne Areli.+ 17 Aser+ mma ne Yimnah, Yiswa, Yiswi, Beria, ne wɔn nuabea Serah. Beria mma ne Heber ne Malkiel.+ 18 Silpa+ a Laban de no maa ne babea Lea no, eyinom ne ne mma a ɔne Yakob woe: wɔn nyinaa yɛ nnipa* 16. 19 Yakob yere Rahel mma ne Yosef+ ne Benyamin.+ 20 Yosef ne Asenat+ a ɔyɛ On* sɔfo Potifera babea no woo Manase+ ne Efraim+ wɔ Egypt. 21 Benyamin mma+ ne Bela, Beker, Asbel, Gera,+ Naaman, Ehi, Ros, Mupim, Hupim,+ ne Ard.+ 22 Eyinom ne mma a Rahel ne Yakob woe. Wɔn nyinaa yɛ nnipa* 14. 23 Dan+ ba* ne Husim.+ 24 Naftali+ mma ne Yaseel, Guni, Yeser, ne Silem.+ 25 Eyinom ne Bilha a Laban de no maa ne babea Rahel no asefo a ɔne Yakob woe; wɔn nyinaa yɛ nnipa* baason. 26 Nnipa* a wofi Yakob asen mu a wɔne no kɔɔ Egypt nyinaa yɛ 66.+ Yakob mma yerenom nka ho. 27 Yosef mma a ɔwoo wɔn wɔ Egypt yɛ baanu.* Nnipa* a wofi Yakob fi baa Egypt no nyinaa si 70.+ 28 Yakob dii kan somaa Yuda+ ma ɔkɔbɔɔ Yosef amanneɛ sɛ n’ani kyerɛ Gosen. Bere a wokoduu Gosen asaase so no,+ 29 Yosef ma wosiesiee ne teaseɛnam, na osiim kohyiaa ne papa Israel wɔ Gosen. Bere a oduu ne papa nkyɛn no, ntɛm ara na ɔbam no, na osui paa. 30 Na Israel ka kyerɛɛ Yosef sɛ: “Afei a mahu w’anim sɛ wote ase yi de, miwu mpo a ɛnyɛ hwee.” 31 Ɛnna Yosef ka kyerɛɛ ne nuanom ne ne papa fifo sɛ: “Momma menkɔbɔ Farao amanneɛ+ sɛ, ‘Me nuanom ne me papa fifo a wɔwɔ Kaanan asaase so no aba me nkyɛn.+ 32 Wɔyɛn nguan+ ne anantwi,+ na wɔde wɔn nguan ne wɔn anantwi ne nea wɔwɔ nyinaa aba ha.’+ 33 Sɛ Farao frɛ mo bisa mo sɛ, ‘Adwuma bɛn na moyɛ?’ a, 34 monka sɛ, ‘Wo nkoa ne yɛn agyanom ayɛn nguan ne anantwi afi yɛn mmofraase.’+ Eyi bɛma moatena Gosen asaase so,+ efisɛ Egyptfo kyi nguanhwɛfo.”+
^ Anaa “ne ho nnipa.”
^ Kyerɛ sɛ, owu a, Yosef na ɔbɛka n’ani agu so.
^ Anaa “Ne mma mmarima ne ne mma mmea akra.”
^ Anaa “akra baanu.”